Galaxy S8 မှာ ပါဝင်ဖို့ သေချာနေတဲ့ အချက်များ
29 Mar 2017 . 5:32 PM
ကဲ ဒီနေ့ကတော့ တကယ့်နေ့ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ နယူးယော့ခ်စံတော်ချိန် မနက် ၁၁နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉နာရီခွဲခန့်) မှာ Samsung က အဓိကစမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy S8 စမတ်ဖုန်းသစ်ကို ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိနေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သတင်းပေါက်ကြားပြီးဖြစ်နေတဲ့ Galaxy S8 ဖုန်းမှာ ပါဝင်ဖို့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ အချက်အလက်အချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“Edge Screen” နဲ့ ချည်းပဲ ထုတ်လုပ်မယ့်အပြင် Super Slim Bezels လို့ခေါ်တဲ့ ဘေးအနားသတ်တွေရဲ့ အရွယ်အစားကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းအောင်ချုံ့မယ့်ဒီဇိုင်း၊ Intelligent Assistant “Bixby” နဲ့ Samsung Dex လို့ခေးတဲ့ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာ၊ ကီဘုတ်နဲ့ မောက်တွေလို တခြား External Display တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လာမှာပါ။
အဲ့ဒိအပြင် မကြာသေးတဲ့ သတင်းတစ်ခုအရ “Bluetooth Dual Audio” စနစ်ကို အသုံးပြုထားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် Bluetooth အသံကို မတူညီတဲ့ Hedsets တွေ၊ စပီကာတွေနဲ့ တစ်ချိန်ထဲအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒါက အကြမ်းဖျဉ်းသုံးသပ်မှုပါ။ အသေးစိတ်အနေနဲ့
Always On Display – S7 လိုပဲ နာရီ၊ ပြက္ခဒိန်အပါအဝင် အချက်အလက်တွေကို Screen Off လုပ်ထားရင်တောင် တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Multi window – သင့်အနေနဲ့ App နှစ်ခုကို မျက်နှာပြင် အပြောင်းအလဲ လုပ်စရာမလိုပဲ တစ်ချိန်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။ တကယ်လို့ Snap Window လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အပေါ်ပိုင်းမျက်နှာပြင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဧရိယာပမာဏကို Pin လုပ်ထားပြီး တခြား App နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အောက်ကနေ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Hello Bixby – သင့်အနေနဲ့ ရာသီဥတု၊ Reminder နဲ့ Alarm တွေလို Update ဖြစ်ရမယ့် Content တွေကို တစ်နေရာထဲကနေ မကြာခန Update လုပ်ခိုင်းနိုင်မှာပါ။ Helllo Bixby က သင့်ရဲ့ သုံးစွဲတဲ့ပုံစံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ App တွေနဲ့ Function ကိုအခြေခံတဲ့ သင့်တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကြံပြုပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
Bixby Vision (image search) – Bixby Vision က ပုံရိပ်တွေကို ရှာဖွေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး သင့်ကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေပေးနိုင်မှာပါ။ Bixby Vision ကို Activate လုပ်ပြီး ပစ္စည်းတွေကို Scan လုပ်နိုင်တဲ့အပြင်၊ ကင်မရာကနေတစ်ဆင့် ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ အွန်လိုင်းလိပ်စာတွေ၊ အနီးဆုံးနေရာတွေ စတဲ့တည်နေရာတွေကိုပါ ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။ အဲ့ဒီအပြင် ကိုယ်မသိတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို ပြလိုက်တာနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်မှာပါ။
Reminder – Schedule Notification တွေနဲ့ To Do items တွေ တည်နေရာပြသတိပေးစနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ Reminders ကနေတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုတွေ၊ ပုံတွေနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်က အချက်အလက်တွေကိုလည်း Remind ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Bixby (intelligent voice assistant) – Bixby ဟာ လိမ္မာတဲ့အသံလက်ထောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့အနေနဲ့ ပစ္စည်းကို ပိုမိုပြီး အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ Bixby ကီးကိုနှိပ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် “Bixby” လို့ခေါ်ပြီးတော့ သူ့ကို အကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Bixby က တုံ့ပြန်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စကားပြောပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် စာရိုက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် စကားစမြည်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ Bixby ဟာ သင်လိုချင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အချက်အလက်တွေကို ဖွင့်ပေး / ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။
Iris recognition – မျက်ကြည်လွှာဖတ်လုံခြုံရေး စနစ်ဟာ သင့်မျက်ကြည်လွှာက ပုံစံတွေ၊ သဏ္ဍန်တွေစတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို တုနှိုင်းမဲ့အောင် ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်တာကြောင့် သင့်ပစ္စည်းရဲ့လုံခြုံရေးကို အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ မျက်နှာပြင်ကို Unlock လုပ်ဖို့အတွက် Iris Data ကို အလျှင်အမြန်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Samsung Account နဲ့ Verify လုပ်ထားရမှာပါ။
Fingerprint Recognition – Built-in အနေနဲ့ Fingerprint ကို ဖတ်နိုင်မယ့် ဆင်ဆာတစ်ခုပါဝင်ပြီး လက်ဗွေရာကို ထိတွေ့လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Fingerprint ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်အနေနဲ့ ဖုန်းကို Unlock လုပ်တာ၊ Samsung Pay နဲ့ ပေးခြေတာတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Secure Folder – သင့်ရဲ့ “Private Content တွေနဲ့ App တွေကို Secure Folder” ထဲမှာ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ ဓာတ်ပုံတွေ၊ မှတ်ဥာဏ်တွေနဲ့ App တွေကို Secure Folder နဲ့ထည့်ပြီး တခြားသူတွေဝင်လို့မရအောင် သိမ်းထားနိုင်မှာပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်လုပ်နိုင်တဲ့ Third Party App တွေရှိပေမယ့် App တွေတော့ ထည့်သိမ်းမထားနိုင်ပါဘူး။ Samsung လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ တော်တော်မိုက်ပါတယ်။
Samsung Pass – Website တွေအတွက် သင့် ID တွေနဲ့ Password တွေကို Samsung Pass လို့ခေါ်တဲ့ သင့် Biometric ဒေတာတွေကိုအခြေခံ၊ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ Verify လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြင် ဖုန်းတွေမှာပါဝင်နေကြဖြစ်တဲ့ Pattern တွေ၊ Password တွေနဲ့ ထည့်သွင်းတဲ့လုံခြုံရေး စနစ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။
Galaxy S8 ဖုန်းသစ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးဖို့ ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ Selfie ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ကင်မရာမှာ Smart Auto Focus ပါဝင်ပြီး ရိုက်ကူးမှုအမျိုးမျိုးကို Shooting Modes အမျိုးမျိုး၊ Filter အမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
Samsung Pay – ဒါကတော့ Credit ၊ Debit ပုံစံတွေနဲ့ Samsung ကနေ ပေးချေမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
Samsung DeX – Samsung DeX ကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ သင့်စမတ်ဖုန်းကို တခြား ကွန်ပျူတာတွေ အပါအဝင် တီဗီတွေ၊ မော်နီတာတွေလို External Display တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်အသုံးပြုလိုက်ရင် External Display မှာ ကီးဘုတ်တွေ၊ Mouse တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်သွားပြီး ခွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Samsung Connect – အနီးအနားက ပစ္စည်းတွေကို ချိတ်ဆက်နိုင်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် Bluetooth Headset တွေနဲ့ အခြားစမတ်ဖုးတွေပါပဲ။ လွယ်ကူ၊ လျှင်မြန်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ TV နဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်အပြင်၊ IoT ပစ္စည်းတွေကိုလည်း စမတ်ဖုန်းကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Cloud – ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ App တွေစတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာတွေကို သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့် Store တစ်ခုပါ။ လုံခြုံပြီး Samsung Cloud ကို တခြား ပစ္စည်းတွေကနေလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Bluetooth Dual audio – ဒီဖုန်းမှာမှ အသစ်ပါဝင်လာမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ စမတ်ဖုန်းက Audio တွေကို Bluetooth Headset နှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် စပီကတွေကို ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်မှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီက အသံတွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် သင့်ကောင်မလေးနဲ့သင့် “နားကြပ်တစ်ခုကိုတစ်ဖက်စီတပ်ရင်း သီချင်းနားထောင်ဖူးတယ်” လို့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ?
External Memory Card (microSD card) – microSD ကတ်ကိုလည်း Galaxy S8 မှာ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။ သတင်းတွေကတော့ 1TB အထိဆန့်တဲ့ ကတ်ကိုတောင် ထည့်နိုင်အောင် Samsung ကပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
Water resistant – သင့်အနေနဲ့ Galaxy S8 မှာ IP68 အဆင့်ရှိတဲ့ ရေစိမ်ခံနိုင်စွမ်းကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ စမတ်ဖုန်းကို စိုရွှဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကဲဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ Galaxy S8 မှာ ပါဝင်မယ့် အသေးစိတ်အချက်အချို့ပါပဲ။ တကယ်ဖြစ်လာမလာဆိုတာကတော့ ထွက်လာမှ သေချာသိရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းတွေဘာတွေတော့ သတင်းထွက်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဒီနေ့ည ၉နာရီခွဲမှာ ထွက်လာမယ့် ဖုန်းကတော့ ရင်ခုန်စရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Akhayar ကလည်း ထုတ်ဖော်တဲ့အချိန်ကျရင် Update အချက်အလက်တွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီတင်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းပေးသွားပါမယ်။ 🙂
Galaxy S8 မှာ ပါဝငျဖို့ သခြောနတေဲ့ အခကျြမြား
ကဲ ဒီနကေ့တော့ တကယျ့နပေ့ါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ နယူးယော့ချစံတျောခြိနျ မနကျ ၁၁နာရီ (မွနျမာစံတျောခြိနျ ည ၉နာရီခှဲခနျ့) မှာ Samsung က အဓိကစမတျဖုနျးဖွဈတဲ့ Galaxy S8 စမတျဖုနျးသဈကို ထုတျလုပျသှားဖို့ရှိနလေို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သတငျးပေါကျကွားပွီးဖွဈနတေဲ့ Galaxy S8 ဖုနျးမှာ ပါဝငျဖို့ သခြောသလောကျဖွဈနတေဲ့ အခကျြအလကျအခြို့ကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
“Edge Screen” နဲ့ ခညျြးပဲ ထုတျလုပျမယျ့အပွငျ Super Slim Bezels လို့ချေါတဲ့ ဘေးအနားသတျတှရေဲ့ အရှယျအစားကို အံ့အားသငျ့ဖှယျကောငျးအောငျခြုံ့မယျ့ဒီဇိုငျး၊ Intelligent Assistant “Bixby” နဲ့ Samsung Dex လို့ခေးတဲ့ ဖုနျးကို ကှနျပြူတာ၊ ကီဘုတျနဲ့ မောကျတှလေို တခွား External Display တဈခုနဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျမယျ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျလာမှာပါ။
အဲ့ဒိအပွငျ မကွာသေးတဲ့ သတငျးတဈခုအရ “Bluetooth Dual Audio” စနဈကို အသုံးပွုထားမှာဖွဈကွောငျးလညျး သိပါတယျ။ ဒါဟာဆိုရငျ Bluetooth အသံကို မတူညီတဲ့ Hedsets တှေ၊ စပီကာတှနေဲ့ တဈခြိနျထဲအသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကဲဒါက အကွမျးဖဉျြးသုံးသပျမှုပါ။ အသေးစိတျအနနေဲ့
Always On Display – S7 လိုပဲ နာရီ၊ ပွက်ခဒိနျအပါအဝငျ အခကျြအလကျတှကေို Screen Off လုပျထားရငျတောငျ တှမွေ့ငျရမှာပါ။
Multi window – သငျ့အနနေဲ့ App နှဈခုကို မကျြနှာပွငျ အပွောငျးအလဲ လုပျစရာမလိုပဲ တဈခြိနျတညျး အလုပျလုပျနိုငျမှာပါ။ တကယျလို့ Snap Window လုပျဆောငျခကျြကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ အပျေါပိုငျးမကျြနှာပွငျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဧရိယာပမာဏကို Pin လုပျထားပွီး တခွား App နဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို အောကျကနေ အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။
Hello Bixby – သငျ့အနနေဲ့ ရာသီဥတု၊ Reminder နဲ့ Alarm တှလေို Update ဖွဈရမယျ့ Content တှကေို တဈနရောထဲကနေ မကွာခန Update လုပျခိုငျးနိုငျမှာပါ။ Helllo Bixby က သငျ့ရဲ့ သုံးစှဲတဲ့ပုံစံကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီး သတငျးအခကျြအလကျတှေ၊ App တှနေဲ့ Function ကိုအခွခေံတဲ့ သငျ့တဈနတေ့ာလုပျဆောငျခကျြတှကေို အကွံပွုပေးသှားနိုငျပါတယျ။
Bixby Vision (image search) – Bixby Vision က ပုံရိပျတှကေို ရှာဖှတေဲ့ လုပျဆောငျခကျြဖွဈပွီး သငျ့ကို အဆငျပွပွေနေဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ရှာဖှပေေးနိုငျမှာပါ။ Bixby Vision ကို Activate လုပျပွီး ပစ်စညျးတှကေို Scan လုပျနိုငျတဲ့အပွငျ၊ ကငျမရာကနတေဈဆငျ့ ထုတျကုနျတှရေဲ့ အှနျလိုငျးလိပျစာတှေ၊ အနီးဆုံးနရောတှေ စတဲ့တညျနရောတှကေိုပါ ရှာဖှနေိုငျမှာပါ။ အဲ့ဒီအပွငျ ကိုယျမသိတဲ့ ဘာသာစကားတှကေို ပွလိုကျတာနဲ့ ဘာသာပွနျပေးနိုငျမှာပါ။
Reminder – Schedule Notification တှနေဲ့ To Do items တှေ တညျနရောပွသတိပေးစနဈတှေ ပါဝငျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ Reminders ကနတေဈဆငျ့ ဗီဒီယိုတှေ၊ ပုံတှနေဲ့ ဝကျဘျဆိုကျက အခကျြအလကျတှကေိုလညျး Remind ပွုလုပျထားနိုငျပါတယျ။
Bixby (intelligent voice assistant) – Bixby ဟာ လိမ်မာတဲ့အသံလကျထောကျတဈခုဖွဈပွီး သူ့အနနေဲ့ ပစ်စညျးကို ပိုမိုပွီး အဆငျပွပွေခြေောခြောမှမှေ့ေ့ ကိုငျတှယျနိုငျဖို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ Bixby ကီးကိုနှိပျပွီး ဒါမှမဟုတျ “Bixby” လို့ချေါပွီးတော့ သူ့ကို အကူအညီတောငျးလိုကျတဲ့အခါမှာ Bixby က တုံ့ပွနျမှုပေးနိုငျမှာဖွဈပွီး စကားပွောပွီးဖွဈဖွဈ၊ ဒါမှမဟုတျ စာရိုကျပွီးပဲဖွဈဖွဈ စကားစမွညျပွောဆိုနိုငျပါတယျ။ Bixby ဟာ သငျလိုခငျြတဲ့ လုပျဆောငျခကျြ၊ အခကျြအလကျတှကေို ဖှငျ့ပေး / ရှာပေးနိုငျပါတယျ။
Iris recognition – မကျြကွညျလှာဖတျလုံခွုံရေး စနဈဟာ သငျ့မကျြကွညျလှာက ပုံစံတှေ၊ သဏ်ဍနျတှစေတဲ့ သှငျပွငျလက်ခဏာတှကေို တုနှိုငျးမဲ့အောငျ ကောငျးမှနျစှာ ဖတျရှုနိုငျတာကွောငျ့ သငျ့ပစ်စညျးရဲ့လုံခွုံရေးကို အကောငျးဆုံးစောငျ့ရှောကျပေးနိုငျမှာပါ။ သငျ့အနနေဲ့ မကျြနှာပွငျကို Unlock လုပျဖို့အတှကျ Iris Data ကို အလြှငျအမွနျအသုံးပွုနိုငျပွီး Samsung Account နဲ့ Verify လုပျထားရမှာပါ။
Fingerprint Recognition – Built-in အနနေဲ့ Fingerprint ကို ဖတျနိုငျမယျ့ ဆငျဆာတဈခုပါဝငျပွီး လကျဗှရောကို ထိတှလေို့ကျရုံပဲဖွဈပါတယျ။ Fingerprint ကိုအသုံးပွုပွီး သငျ့အနနေဲ့ ဖုနျးကို Unlock လုပျတာ၊ Samsung Pay နဲ့ ပေးခွတောတှပွေုလုပျနိုငျပါတယျ။
Secure Folder – သငျ့ရဲ့ “Private Content တှနေဲ့ App တှကေို Secure Folder” ထဲမှာ ထညျ့သှငျးသိမျးဆညျးထားနိုငျမှာပါ။ ဓာတျပုံတှေ၊ မှတျဉာဏျတှနေဲ့ App တှကေို Secure Folder နဲ့ထညျ့ပွီး တခွားသူတှဝေငျလို့မရအောငျ သိမျးထားနိုငျမှာပါ။ ဒီလုပျဆောငျခကျြလုပျနိုငျတဲ့ Third Party App တှရှေိပမေယျ့ App တှတေော့ ထညျ့သိမျးမထားနိုငျပါဘူး။ Samsung လုပျဆောငျခကျြကတော့ တျောတျောမိုကျပါတယျ။
Samsung Pass – Website တှအေတှကျ သငျ့ ID တှနေဲ့ Password တှကေို Samsung Pass လို့ချေါတဲ့ သငျ့ Biometric ဒတောတှကေိုအခွခေံ၊ လုံခွုံရေးယူထားတဲ့ လုပျဆောငျခကျြမှာ Verify လုပျထားနိုငျပါတယျ။
အဲ့ဒီအပွငျ ဖုနျးတှမှောပါဝငျနကွေဖွဈတဲ့ Pattern တှေ၊ Password တှနေဲ့ ထညျ့သှငျးတဲ့လုံခွုံရေး စနဈလညျး ရှိပါသေးတယျ။
Galaxy S8 ဖုနျးသဈမှာ ဓာတျပုံတှရေိုကျကူးဖို့ ကငျမရာလုပျဆောငျခကျြတှကေို တိုးမွှငျ့ထားပါတယျ။ အဲ့ဒီအပွငျ ရှငျးလငျးပွတျသားတဲ့ Selfie ပုံတှရေိုကျကူးနိုငျဖို့ ကငျမရာမှာ Smart Auto Focus ပါဝငျပွီး ရိုကျကူးမှုအမြိုးမြိုးကို Shooting Modes အမြိုးမြိုး၊ Filter အမြိုးမြိုးနဲ့ ရိုကျကူးနိုငျမှာပါ။
Samsung Pay – ဒါကတော့ Credit ၊ Debit ပုံစံတှနေဲ့ Samsung ကနေ ပေးခမြှေုတှပွေုလုပျနိုငျတဲ့ လုပျဆောငျခကျြပါ။
Samsung DeX – Samsung DeX ကတော့ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ သငျ့စမတျဖုနျးကို တခွား ကှနျပြူတာတှေ အပါအဝငျ တီဗီတှေ၊ မျောနီတာတှလေို External Display တှနေဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျမယျ့လုပျဆောငျခကျြပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ဒီလုပျဆောငျခကျြအသုံးပွုလိုကျရငျ External Display မှာ ကီးဘုတျတှေ၊ Mouse တှနေဲ့ ခြိတျဆကျသှားပွီး ခှငျကယျြကယျြနဲ့ အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။
Samsung Connect – အနီးအနားက ပစ်စညျးတှကေို ခြိတျဆကျနိုငျမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ Bluetooth Headset တှနေဲ့ အခွားစမတျဖုးတှပေါပဲ။ လှယျကူ၊ လြှငျမွနျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ TV နဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျးတှကေိုလညျး ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ့အပွငျ၊ IoT ပစ်စညျးတှကေိုလညျး စမတျဖုနျးကနေ လှယျလှယျကူကူ ထိနျးခြုပျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Samsung Cloud – ဓာတျပုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ App တှစေတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ဒတောတှကေို သိမျးဆညျးနိုငျမယျ့ Store တဈခုပါ။ လုံခွုံပွီး Samsung Cloud ကို တခွား ပစ်စညျးတှကေနလေညျး ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
Bluetooth Dual audio – ဒီဖုနျးမှာမှ အသဈပါဝငျလာမယျ့ လုပျဆောငျခကျြပါ။ စမတျဖုနျးက Audio တှကေို Bluetooth Headset နှဈခု ဒါမှမဟုတျ စပီကတှကေို ထုတျလှငျ့ပေးနိုငျမှာပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ခြိတျဆကျပစ်စညျးတဈခုစီက အသံတှကေိုလညျး ထိနျးခြုပျနိုငျမှာဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့ကောငျမလေးနဲ့သငျ့ “နားကွပျတဈခုကိုတဈဖကျစီတပျရငျး သီခငျြးနားထောငျဖူးတယျ” လို့ပွောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ?
External Memory Card (microSD card) – microSD ကတျကိုလညျး Galaxy S8 မှာ ဆကျလကျအသုံးပွုနိုငျဦးမှာပါ။ သတငျးတှကေတော့ 1TB အထိဆနျ့တဲ့ ကတျကိုတောငျ ထညျ့နိုငျအောငျ Samsung ကပွုလုပျပေးသှားမယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
Water resistant – သငျ့အနနေဲ့ Galaxy S8 မှာ IP68 အဆငျ့ရှိတဲ့ ရစေိမျခံနိုငျစှမျးကိုတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ စမတျဖုနျးကို စိုရှဲတဲ့ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အခွအေနတှေမှော ကောငျးကောငျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ကဲဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြအလကျတှကေတော့ Galaxy S8 မှာ ပါဝငျမယျ့ အသေးစိတျအခကျြအခြို့ပါပဲ။ တကယျဖွဈလာမလာဆိုတာကတော့ ထှကျလာမှ သခြောသိရမှာပါ။ စြေးနှုနျးတှဘောတှတေော့ သတငျးထှကျထားခွငျးမရှိသေးပါဘူး။
ဒီနညေ့ ၉နာရီခှဲမှာ ထှကျလာမယျ့ ဖုနျးကတော့ ရငျခုနျစရာပါ။ ကြှနျတျောတို့ Akhayar ကလညျး ထုတျဖျောတဲ့အခြိနျကရြငျ Update အခကျြအလကျတှကေို အခြိနျနဲ့ တဈပွေးညီတငျပေးနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးပေးသှားပါမယျ။ ?